Yintoni iCanine Dosage yeClaritin? - Inja Impilo
Yintoni iCanine Dosage yeClaritin?
Njengabantu, izinja inokuba iyaliwa ngokuqinisekileyoiintlobo zokutya, ukulunywa zizintyatyambo, umungu, ukungunda, kunye neekhemikhali zekhaya. Ngelixa kukho amayeza amiselweyo amiselweyo kugqirha wezilwanyana, unokumisela amayeza e-OTCngokukodwa abantu. Nangona kunjalo, akukhuselekanga ukunika inja yakho iyeza elinje ngaphandle kwemiyalelo ethile kugqirha wezilwanyana.
Ngokuqhelekileyo amayeza oNyango lweeNja
Amayeza e-antihistamine yabantu anje nge Claritin (Loratadine), Benadryl (Diphenhydramine), Tavist (Clemastine), Zyrtec (Cetirizine), kunye neAtarax (Hydroxyzine) zihlala zicetyiswa ngoogqirha bezilwanyana ukuba bazisebenzise ekunyangeni izinja. La mayeza awela kudidi oluthile lwee-antihistamines ezibizwa ngokuba Iibhlokhi zeH1 . Basebenza ngoku Ukujolisa kwiimbali , into emzimbeni wakho yenziwa mandundu kukuchasana nento ethile ongadibani nayo. I-H1 blocker inokubonelela ngoncedo lokungabikho komzimba kubantu kuphela kodwa nakwizinja kunyeiikati. Nangona kunjalo, awusoze wanika isilwanyana sakho olu hlobo lonyango ngaphandle kokuqala ubonane nogqirha wezilwanyana.
Igalari yeeBhasikithi zeZipho zokuzalwa kweNja
Ukunika uClaritin kwiiCanines
Ngelixa ugqirha wezilwanyana unokuyalela uClaritin ukuba akuncedeinja iimpawu zokungabikho komzimba, Kuya kufuneka abale idosi echanekileyo isekwe kubudala benja yakho, ubunzima, ubuzaza beempawu, kunyeuhlobo komzimba. Uyakuthathela ingqalelo amanye amayeza inja yakho ekuyo ngoku kunye nayo nayiphi na imeko yezempilo enokuthi ichaphazeleke kakubi yiClaritin. Ungazami ukunika uClaritin inja yakho ngaphandle kokuqala uthethe nogqirha wezilwanyana.
IClaritin icinyiwe kwilebula yeeNja
Akukho zikhombisi zokuguqulwa kwe-canine kushicilelo ezibonisa eyona dosi yeClaritin yezinja njengoko ithathwa ngokuba 'kukusetyenziswa kwelebheli'. Ngelixa unokufumana izikhokelo kwi-intanethi okanye ufumane iingcebiso kwabanye abanini zinja, usebenzisa naliphi na ichiza ngaphandle kokuxoxa ngayo kunye nodokotela wezilwanyana unakho iziphumo ebezingalindelekanga ezimandundu njenge ityhefu ye-antihistamine kwayenokuba yistroke. Ungacingi ukuba kukhuselekile ukuba unike inja yakho iyeza ngaphandle kokuba ucetyiswe ngugqirha wezilwanyana. Zininzi izinto ezingena kumthamo ochanekileyo ngaphaya kobunzima nje kwaye umnini anokubangela ukuba inja yakhe igule ngokulula. Ubunzima bungathembeki njengesiseko ngokubanzi sokubala. Ngaphandle kokuba unesikali okanye undwendwele ugqirha wezilwanyana rhoqo ukuze uhlole, unokuqikelela ubungakanani benja yakho ngokuchanekileyo.
Claritin vs Claritin D kunye ne-Claritin
Ukuba ugqirha wezilwanyana ukhululekile ukumisela uClaritin kwinja yakho, kuya kufuneka ukhathalele ukusebenzisa uClaritin rhoqo kunye hayi UClaritin D. Claritin D uqulethe i-pseudoephedrine enokuba yiyo Inetyhefu ezinjeni , kwaye inokubulala. Ngokwe- Umbutho wezonyango waseMelika , Iipilisi ezintathu nje ezingama-30 mg zingakhokelela ekufeni kwenja engama-20.
Iziphumo ebezingalindelekanga zeAntihistamines
Nangona ii-antihistamines ezinjengeBenadryl, kwaye kwezinye iimeko uClaritin, zinokuzisa inja yakho, azikho ngaphandle imiphumela :
Utshintsho ekuhambeni kwamathumbu kunye nokuchama rhoqo
Utshintsho kwindlela yokuziphatha
Yonke inja inokusabela ngokwahlukileyo kumayeza. Ukuba inja yakho ibonakala inempendulo enamandla kuyo nayiphi na i-antihistamine oyinike yona, yeka ukuhambisa idosi elandelayo kwaye ubize ugqirha wezilwanyana kwangoko.
Sebenzisa uClaritin kwiNja yakho
Ngokhokelo lukagqirha wezilwanyana, uClaritin unokusebenza kakuhle ekunyangeni isifo senja yakho. Khumbula ukuba usoloko uthetha nogqirha wezilwanyana ngaphambi kokuba usebenzise nayiphi na i-OTC okanye amayeza amayeza ukuze ufumane idosi efanelekileyo yenja yakho kwaye ufunde malunga neziphumo ebezingalindelekanga ezinokubakho ngamanye amaxesha.
Iindidi Zokudanisa Malunga Toys Zonke Izivumelwano Ukungcwaba Nokutshiswa United States Travel
imiqondiso yokuba ikati yakho iyafa
imibuzo emnandi yokubuza intombi yakho
Chaza into oyenzayo elwandle
indlela yokwenza iphepha lokuphanda
Ungalufumana njani ulwazi malunga nomntu
indlela yokususa amabala erusi kwiimpahla